VAKY FASANA : Razana 100 voaroba, tsy mety tratra ireo atidoha be | NewsMada
VAKY FASANA : Razana 100 voaroba, tsy mety tratra ireo atidoha be
Miverina indray ny asan-jiolahy amin’ny halatra taolam-paty eto Antananarivo sy ny manodidina. Fasana telo no norobain’ny jiolahy indray tany Ambohidanierana, anatin’ny Kaominina Andriampamaky. Teo am-panitrihana ny faty halevina afakomaly no tsikaritra fa maherin’ny zato ireo razana voaroba tao amin’ity fasana ity…
Hatezerana miharo alahelo ny an’ity fianakaviana nandevina tany Ambohidanierana, anatin’ny Kaominina Andriampamaky, any amin’ny faritra Avaradrano iny, ny alahady lasa teo. Teo am-panitrihana ny faty vao fantatra fa niharan’ny fandrobana indray ity fasana ity. Raha ny filazan’ny fianakaviana, nohidin’ireo jiolahy ny varavaram-pasana ka izay no tsy nahalalana voaroba indray ity fasana ity. « Efa nisy fotoana io fasana io no voaroba, niampy ireo fasana roa teo akaikiny. Tsikaritra fa nisy razana niparitaka tao ka efa niomana ny fianakaviana hamono ireo taolam-paty sisa tamin’ireo nangalarina ireo. Akory ny fahagagana fa marobe indray ny razana tsy hita. Rehefa atontaly, miisa eo amin’ny 100 mahery ny razana lasan’ny jiolahy », hoy ity solontenam-pianakaviana ity. Nohazavainy fa ny karandoha sy ny taolan-tratra no tsy alain’ireo mpangalatra taolam-paty fa ireo taolan-dava no tena lasibatr’izy ireo tokoa. Malahelo sy niraviravy tanana ireo fianakaviana nidonam-pahoriana manoloana izao razana tsy hita tao anatin’ny fasam-pianakaviana izao. Nahatratra efa ho iray sarety ny lamban-drazana niparitaka tao am-pasana. Nodorana moa ireo ary nofonosina kosa, ireo karandoha sy taolan-tratra sisa tsy lasan’ireo mpamaky fasana. Nilaza ny hametraka fitoriana manoloana izao vaky fasana izao ireto fianakaviana ireto.
Ny mampalahelo, amin’izao toe-javatra mampalahelo izao, ny fasana teo anilan’ity voaroba ity, efa vaky ihany koa. Raha ny voalazan’ny fianakaviana, nametraka hafatra tamin’ny taratasy tao am-pasana ireo jiolahy hoe : « 900.000 ariary ny iray kilao amin’ny taolam-paty ka asakasak’izay tsy hanao ». Ary izao nanao tampody fohy izao ireo jiolahy naka ny taolam-patin’ireo tsy voaroba.
Atao inona marina ?
Manoloana izao vaky fasana miseho etsy sy eroa izao, mbola tsy fantatra mazava ny antony angalarana ireo taolam-paty ireo. Ho an’ny tranga teny Ambohidanierana ity, ny taolan-dava no tena lasibatra fa tsy naka ireo karandoha sy taolan-tratra ireo mpandroba. Araka ny resaka mandeha, anaovana fitaovana anafenana ireo fanondranana an-tsokosoko tahaka ny drogy no hampiasaina ny resaka taolam-paty. Lazaina fa tsy hitan’ny « scanner » io fitaovana vita amin’ny taolam-paty io.
Ny sasany kosa milaza fa ireo taolan-dava ireo ampiana taharo hafa, dia mahatonga diamondra sintetika. Tombantombana avoka izany, saingy mijanona ho petra-kevitra fa mbola tsy ananana porofo mazava. Ny zavatra tsy tako-nafenina, anaovana fanahy iniana potehina ny soatoavina maha malagasy. Ny hasin’ny taolambalo amin’ny maha taolambalo azy mihitsy no zimbazimbain’ny sasany. Manaporofo izany, ireo taolan-dava no tena alain’izy ireo tsy misy indrafo.
Tsy mbola tratra ny atidoha
Efa marobe ireo tra-tehaka tamin’ny fangalarana taolam-paty, fa hatramin’izao, mbola tsy nisy ireo atidohabe tratra tamin’ity tranga iray ity. Ireo mpamaky fasana hatrany no voapaingotra fa ireo mpividy sy mpandray kosa, mbola miriaria. Inona no fepetra raisin’ny fanjakana manoloana izao fanimbazimbana ny maha malagasy izao ? Aiza ny fandraisana andraikitra mazava avy amin’ireo mpanao famotorana hahalalana ny tena marina momba ity halatra taolam-paty ity ? Na ireo heverina ho mpitandro filaminana aza, tsy mahalala mazava ny tena antony hanatanterahan’ireo mpanao ratsy ity halatra taolam-paty ity. Asa fanakorontanana sy fanimbana tsotra izao ny maha izy azy ny Malagasy ve no atao sa tena misy tokoa ny tombontsoa ambadika ? Hatreto, mitaky ny fahaizan’ny mpitandro filaminana ny tena asany mba hahazoana ny tena atidohabe mahakasika ity resaka halatra taolam-paty ity ny vahoaka.